दलहरु सहमति नजिक, भूकम्पपीडितले पहिलो किस्तामा रु डेढ लाख पाउने
पहिलो किस्तामा रु डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा रु ५० हजार दिएर दुई किस्तामा भूकम्पपीडितलाई राहत रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको वार्ता कार्यदलका सदस्य एवम् राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले जानकारी दिए ।
सबै राजनीतिक दललाई एकजुट हुन राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकजुट हु..
‘म अहिले पनि सम्झिरहेको छु । उहाँले एउटा धार र मैले अर्को धारको नेतृत्व गरिरहेका..
१४ असार । नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारल..
१३ असार । कार्यक्रम चल्दाचल्दै अचानक ‘अडियो सिस्टम’ बन्द भयो । ‘कन्सर्ट’हरु बिस..
१३ असार । भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख रुपियाँ दिनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोमबार पनि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसले यसरी सदन चल्न नदिएको यो चौथो दिन हो । निरन्तरको बैठक अबरोधपछि संसद् बैठक स्थगन गरेर दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी ..
१३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयाधीप्रसाद यादबबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, कानुन मन्त्री अग्नी खरेलसहितको टोली सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । ‘कार्..
प्रधान सेनापति क्षत्री आज स्वदेश फिर्ता हुँदै
१२ असार । प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री युनिफिल मिशन लेबनानको निरीक्षण भ्रमणमा पूरा गरी आज स्वदेश फिर्ता हुने भएका छन् । असार ७ गतेदेखि युनिफिल मिशन लेबनानको निरीक्षण भ्रमणमा रहेका क्षत्रीले लेबनानका कायम मुकायम राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तामाम सलाम तथा रक्षामन्त्री समिर मक्वेललगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा उन..
पैसाको लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई नछाड्ने कमल थापाको चेतावनी
१२ असार । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने र धर्म प्रचार गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘गैरसरकारी संस्था खोलेर धर्म प्रचार र परिवर्तन गराउनेलाई सरकारले कारबाही गर्छ,’ हिन्दूत्व जागरण अभियानका लागि धनकुटा पुगेको थापाले भने, ‘सनातनदेखि चलिआएका धर्मलाई रक्षा ..
युवासंघ बाँकेको अध्यक्षमा किशोर थापा
१२ असार । युवा संघ नेपाल बाँकेको अध्यक्षमा किशोर थापा विजयी भएका छन् । थापाले खेम शर्मालाई जम्मा ६ मतले हराएका हुन् । उपाध्यक्ष मिलन शाह, सचिवमा कुश्माखर बस्याल र सह–सविचमा घनश्याम ओली विजयी भएका छन् । कोषाध्यक्ष तिलबीर सुनुवार विजयी भएका छन् । कार्यक्रमको उद्घाटन युवा संघका अध्यक्ष राजिव पहारीले गरेका थिए । कार्यक्रममा [&helli..
बागमती सफाइमा फोहोरसँगै युवाको शव भेटिएपछि…
११ असार । बागमती सफाइ अभियान १६३ औँ हप्तामा पुगेको छ । यी १६३ औँ हप्तामा बागमतीबाट सयौँ टन फोहोरको व्यवस्थापन भयो । शनिबार मात्रै बागमतीबाट सात मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । पूर्व मुख्यसचिवदेखि बरिष्ठ कलाकार र वौद्धिक समूदायको बाक्लो उपस्थिति रहने बागमती सफाइ अभियानमा अरु बेला ती विशिष्ट व्यक्तिले फोहोर निकाल्दै गरेको दृष्य..
महिलाबारे रोचक १० तथ्य (थाहा पाइराख्नुहोस्)
११ असार । महिलाबारे केही रोचक तथ्यहरु फेला परेका छन् । यहाँ महिलाबारे १० रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेका छौँ । १. हरेक वर्ष करिब १ करोड़ ३० लाख किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन् । त्यसमा ९० प्रतिशत त विकासशील मुलुकका हुने गरेका छन् । २. एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा करिब २ किलो ७ सय ग्राम […]
निजामतीमा पुण्य असफल
काठमाडौं । निर्वाचनमा दुई तिहाई जिल्ला र विभागीय समितिमा पहिलो शक्तिका रुपमा जित हासिल गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । २१ सदस्यीय आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित ११ सिट पाएको संगठनले असार १ र २ गते बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले नेतृत्व चयन गर्..
१० असार । युवा संघ नेपालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको सुरक्षा फिर्ता बोलाउन माग गरेको छ । युवा संघका अध्यक्ष राजीव पहारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिइएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले ज्ञानेन्द्रलाई दिएको १ सय ५५ शसस्त्रसहित अन्य सुरक्षा सुविधा फिर्ता बोलाउन सरकारसँग माग गरे । युवा संघ बाँकेको नवौं ज..
१० असार । नेपाली सेनाले निर्माण गरेकोे अस्थायी सामूहिक आवास भवन शुक्रबार स्थानीय गा.वि.स. सचिव र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको रोहबरमा स्थानीय सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ०७२ को शक्तिशाली भूकम्पबाट विस्थापित भई पालमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धु..
९ असार । युवा संघ नेपालले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका केही मधेस केन्द्रित दललाई लखेट्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार मोरङ्ग जिल्ला कमिटिले आयोजना गरेको ‘तराई–मधेसमा बजेट बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै युवा संघका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘युवा संघ नेपालले विगतमा सञ्चालन गरेको मधेस सम्वाद तथा जागर अभियानपछि न..
८ असार । हालै नेकपा (एमाले) का विभागहरुमा सदस्य मनोनयन भएसँगै सचिव छानेर काम अघि बढाएका छन् । यसक्रममा बुधबार भौतिक पूर्वाधार विभागको सचिवमा अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका पूर्वस्ववियु सभापति मोहन गौतमले जिम्मा पाएका छन् । पोलिट्ब्युरो सदस्य डा। विजय पौडेल प्रमुख रहेको त्यस विभागमा सचिवको ..
आज बाह्रविसेमा सुरु भएको अधिवेशनमा देउवा पक्षका विष्णुबहादर खत्री र कांग्रेसका १ नम्बर क्षेत्रीय सभापति बालकृष्ण बस्नेतले पौडेल पक्षधार नतोहरुमाथि कुटपिट गरेका हुन् । उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खत्री र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतका भाइ एवम् क्षेत्रीय सभापति बस्नेतले विद्यार्थी नेता वलदेव त..
प्रधान सेनापति क्षत्री लेबनानमा
७ असार । प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री लेबनान पुगेका छन् । युनिफिल मिसन लेबनानमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिक टोलीको निरीक्षण भ्रमणका लागि उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । लेबनान प्रस्थान गर्नु अघि क्षत्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी वलदेव राज महतले बिदाई गरेका थिए । भ्रमणको क्रममा प्रधान क्षत्रीले यार..
‘आन्तरिक समस्या भएको भन्दै हामीले निर्वाचन कार्यालयमा लिखित जानकारी पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले केही दिने पर्खिने संकेत गर्नुभएको छ, थप गरेको म्यादमा हामी जसरी पनि नाम पठाउँछौँ ।’
६ असार । अफगानिस्तानको काबुलमा सोमबार बम विस्फोटमा परी १४ नेपाली मारिएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दुःख व्यक्त गरेका हुन् । ‘अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आज बिहान सबेरै आतंकबादीहरूको आत्मघाती बम आक्रमणमा परी १२ जना निर्दोष नेपाली ना..